China kwuru na ọ ga-egwupụtakwa Antarctica ma hints na 'udo mmepe nke ego' - China JP Metal & Equipment
China kwuru na ọ ga-egwupụtakwa Antarctica ma hints na 'udo mmepe nke ego'
China chọ ẹbọhọ nchegbu banyere ya ambitions na ịnweta-ọgaranya Antarctica on Monday, na ihe ukara si Beijing nwere dịghị atụmatụ na-amalite na Ngwuputa ke akwa Afrika.
China 's ịgbasa eme pola mpaghara bụ a Baịbụl hiwere isi n'ebe dị ka Beijing na akwado nzukọ kwa afọ nke Antarctic Treaty maka oge mbụ.
Ụfọdụ 400 ndị si 42 mba na 10 mba ozu na-abịachi forum, nke ụkwụ anya Monday na-agwụ June 1.
'E nwere ka a ọdịiche dị n'etiti ihe mgbaru ọsọ nke udo mmepe nke Antarctica ego na nghọta anyị Antarctica,' Lin Shanqing, osote onye isi nke State Oceanic Administration, gwara akuko na sidelines nke forum.
Lin azaghị ajụjụ na ihe o bu n'obi site udo akụ development ma o mesiri ya ike na China na Antarctic njem ndị mmadụ merela 'na-elekwasị anya boosting nghọta anyị nke Antarctic na mma chekwaa na Antarctic gburugburu ebe obibi.'
'Dị ka ihe ọmụma m, China mere dịghị atụmatụ maka Ngwuputa ọrụ Antarctica,' Lin kwukwara.
Ọkachamara ekwupụtawo nchegbu na China na-ebu a ogologo oge mgbaru ọsọ nke adịrị ego si na kọntinent, nke Antarctic Treaty ugbu a akpan.
Otú ọ dị, a protocol nke nkwekorita amachibido akụrụngwa mwepụ ọrụ si na kọntinent na-abịa n'ime review na 2048.
'2048 yiri ka a ogologo ụzọ, ma ... na e nwere nchegbu welitere na Beijing na-achụ a na-okwu' hedging 'atụmatụ bụrụ na Afrika a tụba emeghe ka akụ development, gụnyere Ngwuputa na mmanụ na gas mkpọpu ala, na-eme n'ọdịnihu , 'Marc Lanteigne, lecturer na Chinese mba ọzọ amụma na Massey University, gwara AFP.
'Otú ọ dị, n'oge a, China na-ewere oke-elekọta na-emesi nkà mmụta sayensị na akụkụ nke ya pola atumatu, na-akwalite imekọ ihe ọnụ na ndị ọzọ ọchịchị, na-achụ na-akpata nchegbu na ọ bụ a revisionist ike na Antarctica,' Lanteigne kwuru.
Mba dị iche iche enwe bases na Antarctica, a na-akọrọ ohere maka nnyocha sayensị n'okpuru 1959 nkwekọrịta mba, nke China sonyeere na 1983.
China ugbu a nwere anọ research ụgbọ okporo ígwè na Afrika na a ise na-zubere maka 2019, nke ga-etinye China na par na US na ọnụ ọgụgụ nke bases.
'Hosting nzukọ ahụ na Beijing bụ ohere China iji nweta mba nabata ha (ọhụrụ) ọkwá dị elu na Antarctic omume,' kwuru Anne-Marie Brady, ọkachamara na Chinese na polar ndọrọ ndọrọ ọchịchị na Mahadum nke Canterbury, New Zealand.
China ghara achọ ọ bụla mgbanwe ẹdude Antarctic iwu n'ọdịnihu, Brady gwara AFP.
Ma o kwuru na ha 'na-ala azụ mụbaa nche-ọtùtù, ka gosiri site na ha na-emegide amụma n'ihi na mmiri na-echebe ebe ke Southern Ocean.'
Post oge: Ka-23-2017